Radio Simba – Page 1929 – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Dhaawacyada kooxda Manchester United oo sii Badanaya
Macalinka kooxda Manchester United Louis van Gaal ayaa saxaafada u sheegay in ay kooxdiisa waayi doonto xidigaha daafacyada ka ciyaara ee Chris Smalling iyo Matteo Darmian kulanka ay maalinta Bari ah booqan doonaan kooxda Bournemouth kadib dhaawac soo gaaray xidigaha Daafaca heerka caalami ee xulka dalka Talyaaniga Darmian ayaa laga saaray ciyaartii ay kooxda Manchester United ay guuldarada kala kulantay kooxda ...
Real Madrid oo Mar kale laga soo diiday Racfaan ay Qaadan Laheyd
Xiriirka dalka Spain ee Administrative Tribunal for Sport (TAD) ayaa kooxda Real Madrid ka diiday isku daygii labaad ay ku dooneysay in ay racfaan ay kaga qaadato ganaaxii laga saaray koobka Copa del Rey. Kooxda Real Madrid ayaa dhawaan laga saaray koobka Copa del Rey kadib markii ay ciyaarsiisay xidiga reer Russia Denis Cheryshev kasoo horey kaga ganaaxay koobkaan madaama ...
Taliska Amisom ee Soomaliya iyo Maamulka Juba-land oo ka Hadlay la dagaalanka al-shabaab
Taliyaha Ciidamada Amisom Gen Jonathan Rono oo maanta Gaaray Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubada Hoose ayaa xarunta Madaxtooyada Maamulkaas kula Kulmay Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil ‘’Fartaag’’ Labada Mas’uul ayaa kawada Hadlay sidii loo bilaabi lahaa dagaalka Gobolada jubooyinka iyo Gedo loogu saarayo xarakada al-shabaab oo wali ku sugan meelo kamid ah Goboladaas, Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Cabdullaahi ...
Kooxo dadka dhicijiray Habeenkii oo lagu qabtay Degmada Dharkinley.
Ciidamada ammaanka Maamulka Degmada Dharkinley ee Gobolkan Banaadir ayaa gudaha Degmadaasi ka sameeyey howlgal ujeedkiisu ahaa soo qaqabashada kooxo hubaysan oo xiliyada habeenkii ah dadka rayidka ku dhibaateynjiray degmadaasi xaafadaha ku yaalla. Inta u dhaxaysa Salaadaha Maqribka iyo Cishaha ayaa waxaa muddooyinkii dambe xaafadaha degmada dharkinley kooxo hubaysan oo wata mootada nuuca loo yaqaan Bajaajta ay dhac iyo dilalba ugu ...
Maamulka Gobolka Hiiran oo beeniyey in laga heshiiyey halka lagu qabanaayo shirka Maamul usameynta Hiiraan iyo Sh.dhexe.
Sheekh Xuseen Cismaan Cali Madaxa arrimaha Bulshada Maamulka Gobolka Hiiraan oo la hadlay Idaacadda Simba ee Muqdisho ayaa waxaa uu beeniyey warar maalmihii dambe soo baxayey oo sheegayey in markaasi lagu heshiiyey halka lagu qabanayo shirka maamul u sameynta gobolada hiiraan iyo shabeelaha dhexe. Gudiga Farsamada ee soo qabanlahaa howsha shirka maamul usameynta ayuu sheegay in wali muu ka jiro ...
Soomaaliya oo qorshe cusub u dajisay Siyaasadeeda Dibadda.
Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Xukuumadda Soomaaliya C/salaan Cumar hadliye oo la hadlay warbaahinta ku hadasha Afka Dowladda in Wasaaradiisu ay dajisay qorshe ku saabsan hormarinta Xiriirka Soomaaliya kala dhexeeya Wadamada Caalamka waxaa uu sheegay in muhiimadda Nidaamkan uu u leeyahay dalka ay tahay helida siyaasad nabad galyo ah oo ay Soomaaliya wax kula qaybsato wadamada Caalamka. Wasiirka arrimaha dibadda ...
Dhageyso:-Warka Duhur ee Radio Simba 11-12-2015.
Dhageyso:-Warka Duhur ee Radio Simba 11-12-2015 Waa Jimco. Halkaan ka dhageyso Warka Duhur.
Maamulka Degmada Diinsoor oo guulo ka sheegtay Dagaallo ka dhacay Degmadaasi.
Iyadoo Shalay ay Dagaalo sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay ku dhaxmareen degmada Diinsoor Ciidamada Dowladda Soomaaliya oo ay taageerayaan kuwa AMISOM gaar ahaan Ethiopia ayaa Waxaa dagaalkaasi guulo ka sheegtay Maamulka Degmadaasi. Guddoomiyaha Degmada Diinsoor Shikshigoow oo la hadlay Radio Simba ayaa sheegay in Ciidanka Dowladda iyo Kuwa AMISOM ay la wareegeen inta badan Deegaanada Dagaaladu ay ...
Xiisad dagaal u dhaxaysa Maamulada Khaatuma iyo Soomaaliland ayaa ka taagan Gobolka Sool.
Wararka Saaka Idaacadda Simba ee Muqdisho ay ka heklayso deegaanno ka tirsan Gobolka Sool ayaa sheegaya in Xiisad colaadeed oo u dhaxaysa Ciidamo kala taabacsan Maamulada Soomaaliland iyo Khaatuma Saaka ay ka taagantahay deegaanno ka tirsan gobolka Sool gaar ahaan deegaanno u dhaw Degmada Taleex ee Gobolkaasi Sool. Xiisadda ayaa la sheegay in y timid kadib Markii Masuuliyiinta Maamulka Soomaaliland ...
Maamulka Cusub ee Degmada Lafoole oo ballanqaad u sameeyey shacabdka halkaa ku nool.
Xilli shalay Maamulka koonfur galbeed Soomaaliya uu maamul cusub u magacaabay degmada Lafoole oo ka mid ah degmooyinka gobolka Shabeelaha hoose ayaa waxaa magacaabidaasi kadib maamulku uu sheegay in waxyaabo badan uu qabandoono. Xaawo Xaaji oo loo magacaabay gudoomiyaha cusub ee degmada Lafoole oo la hadashay Idaacadda Simba ee Muqdisho ayaa sheegtay in isbadallo badan ay waddo islamarkaana qorsheyaal cusub ...
Page 1,929 of 2,066« First...1,9001,9101,920«1,9271,9281,9291,9301,931 » 1,9401,9501,960...Last »